ဘောလုံးဟောကိန်းများ Bucaramanga vs Santa Fe 25 July 2021
၂၀၂၁ ကိုလံဘီယာ Primera A
Bucaramanga4Santa Fe 3
1xTipz (56.88% ရေနံချောင်း / 5840) Bucaramanga အနိုင်ရသူ
Asianbookies (75.41% ရေနံချောင်း / 12020) Santa Fe အနိုင်ရသူ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Bucaramanga vs Santa Fe ဒီ၏ Jul 25, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် ၂၀၂၁ ကိုလံဘီယာ Primera A
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Bucaramanga vs Santa Fe?
၂၀၂၁ ကိုလံဘီယာ Primera A ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Bucaramanga vs Santa Fe အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ ၂၀၂၁ ကိုလံဘီယာ Primera A of Jul 25, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Bucaramanga အနိုင်ရ၊ Santa Fe အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် B. Fernández
assist Á. Meléndez
assist B. Téliz
၏ရည်မှန်းချက် J. Cuenú
အစားထိုး N. Moreno
အားဖြင့် L. Pico
အစားထိုး J. Caballero
အားဖြင့် C. Porras
အစားထိုး J. Ramos
၏ရည်မှန်းချက် A. Correa
assist S. Cárdenas
အစားထိုး J. Hernández
အားဖြင့် S. Cárdenas
အစားထိုး S. Montoya
အားဖြင့် M. Acosta
အစားထိုး A. Quintana
အားဖြင့် B. Fernández
အစားထိုး J. Pedroza
အားဖြင့် J. Arias
၏ရည်မှန်းချက် K. Osorio
အစားထိုး C. Subero
အားဖြင့် Á. Meléndez
အစားထိုး E. Quiñónes
အားဖြင့် A. Sarmiento
၏ရည်မှန်းချက် J. Ramos